7 Best Nootropics (Daroogada Smart) ee suuqa Bromantane
/blog/Gallery/7 Best Nootropics (Daroogada Smart) ee suuqa Bromantane
Posted on 09 / 15 / 2018 by 阿斯劳 ku qoray Gallery.
Wax kasta oo ku saabsan budada Bromantane
1. Qalabka kiimikada ee Bromantane
2.Bromantane Sharaxa Guud
3. Isticmaal budada Bromantane Isticmaal
4.Balbadda budada ah ee budhcadda
5. Daawada budada Bromantane
Budada Bromantane waa kiciye leh waxyaabo anxiolytic ah oo laga sameeyay Ruushka dabayaaqadii 80-meeyadii taas oo inta badan ku dhaqanta iyadoo la joojinayo dib u soo noqoshada dopamine iyo serotonin ee maskaxda, in kasta oo ay sidoo kale leedahay saameyn cholinergic ah oo ah qiyaaso badan. Natiijooyinka daraasaduhu waxay soo jeedinayaan in isku darka nafsaaniga ah iyo saameynta anxiolytic ay wax ku ool u tahay daaweynta daaweynta asthenic. Waxay kor u qaadeysaa waxqabadka muruqyada waxaana loo isticmaalaa sidii maskax ahaan iyo kiciyaha difaaca jirka.
Waagii hore, waxaa loo isticmaalay doping, iyo ciyaaraha Olimbikada Atlanta ee 1996, dhowr qof ayaa muujiyey jawaab togan ee imtixaanka. Dabadeed, waxaa loo mamnuucay isticmaalka sida kiciyaha iyo wakiilka maskaxda, waxaana lagu qeexay sida daalacanaha liiska waxyaabaha la mamnuucay ee qawaaniinta ladagaallanka doping adduunka. Daraasadaha daroogada ee kala soocidan waxaa si ballaaran loo sameeyaa, iyo derisyo badan ayaa la yaqaanaa, laakiin cilmi baaris ku saabsan kan ugu caansan ayaa ah kuwa ugu horumarsan. Tijaabooyinka aadanaha, sida horumarinta dulqaadashada xaaladaha ba'an, ayaa sidoo kale sii waday.
Daraasaduhu waxay muujiyeen in isku darka saamaynta daawada kiciyaha iyo daawada kacsan ee bromanthan ay waxtar badan u leedahay daaweynta asthenia marka loo barbar dhigo placebo
1. Qalabka kiimikada Bromantane
Bromantan waa calaamad u ah Ladasten, oo sidoo kale loo yaqaanno Ruushka sida phenyllamine adamantyl bromide.
Codsiga: hadal (kiniin)
Nafaqada noolaha noolaha: Saacadaha 11.21 (ee aadanaha)
Saacadaha 7 (jiir)
Bromantan waa wax aan la saadaalin Karin, 50-100mg qiyaasta kicinta iftiinka, niyadda wanaagsan, nadiifinta iftiinka, si fiican u xoojinta (150-250mg +, iyada oo ku xiran waayo-aragnimada aan la leenahay dareenka) waxaa jira muraayad iftiin leh, kicinta jidheed.
Bromantan waa dardar-celiye gacan ka geysanaya horumarinta ciyaaraha fudud. 26th Olympic Games ee 1996In Atlanta, USA, oo la eegayo fadeexadaha caalamiga ah ee caalamiga ah, IOC waxay diyaarisay faahfaahin faahfaahsan kahor ciyaaraha Olombikada, oo ay ku jiraan khubarada takhasuska tijaabada daroogada ee Maraykanka iyo Jarmalka iyo iibsashada goobo imtixaan oo heer sare ah.
Isticmaalka daroogadani waa mid caadi ah; marka lagu daro, kuma soo darin liiska la mamnuucay IOC. Kolesov waxa kale oo uu ku adkaystay inay warqad u qoreen gudiga caafimaadka ee IOC laba sano ka hor si ay u waydiiyaan bal in Bromantan uu yahay daroogo mamnuuc ah iyo inkale, laakiin jawaab looma helin, sidaa darteed waxaa loo arkaa mid amaan ah
Saraakiisha Guddiga Caafimaadka Olombikada Caalamiga ah ayaa beeniyay dhacdada waxayna u arkeen daroogada inay tahay mid isku dhafan oo steroids iyo waxyaabo kale oo kiciyeyaal ah iyo wakiillo waji daboolaya, waxaana jira qodob dheeri ah oo ku jira liiska IOC ee daroogooyinka la mamnuucay, illaa iyo inta Daroogooyinka ay ku fiicnaadaan cayaartoyda Waxqabadka waxaa loo qaadan karaa daroogo xaaraan ah. Labada dhinacba waxay leeyihiin ra’yigooda.
3.Isticmaal budada Bromantane Isticmaal
Daawooyinkani waxay leeyihiin saameyn ballaaran oo bayooloji ah, gaar ahaan sifooyinka iyo walxaha anxiolytic, saameynta farshaxanka ee muhiimka ah waxay saameyn ku yeelaneysaa habka dhexe ee dareenka, taas oo muujinaysa waxqabadka jidheed iyo maskaxda, hoos u dhiska daalidda iyo dardargelinta soo kabashada ka dib culeys maskaxeed iyo maskaxeed.
Xakameynta dawada xayawaanka ee daalka ayaa la samayn karaa:
• Kiciyeyaasha maskaxda ee maskaxdu (daal badan inta kaydka tamarta);
• Xayawaanka tamarta soo saaraya (saameynta ugu sareysa waxaa lagu xusay waqtiga maamulka);
• Xeer-hayayaasha metabolism (Maaddooyinka si xakameysan u xakameynaya ama xannibaya jidadka dheef-shiid kiimikaadka).
Xeer-ilaaliyeyaasha waxaa loo gudbiyaa daawooyinka dheef-shiid kiimikaadka ee ficil-la'aan ah, kuwaas oo sidoo kale laga yaabo inay leeyihiin, heerka ama ka hooseeya, waxqabadka antihypoxic. Daroogadu waxay ku kala duwan yihiin antihypoxants in ay ugu horreyn kiciyaan cadeynta borotiinka iyo kordhinta waxtarka. Waxaa intaa dheer, waxay leeyihiin saameyn antihypoxic ee xaaladaha hypoxic, taas oo ay sabab u tahay awoodda hoos udhaca mitokondria si oksidise substrates ay sameeyaan jimicsiga jirka oo kordhay, oo aan ku jirin shuruudaha hypoxic ee etiology kale.
5.Daawada budada Bromantane
Marka afka laga qaato, daroogadu dhakhso ayey u jirtaa, laakiin si buuxda ugama nuugo mareenka caloosha iyo mindhicirka dhiigga (bioavailability waa 42%), si dhakhso ah iyo tiro badan oo loogu qaybiyo xubnaha iyo unugyada, laakiin si tartiib tartiib ah ayaa looga saaraa jirka. Lagu shubay nudaha adipose. Qiyaasta nuugista bromantane ee marinka caloosha iyo mindhicirka ee dumarka aad ayey uga sarreysaa, siday u kala horreeyaan, nolosha nuska ayaa ka gaaban tan ragga. Waqtiga lagu gaarayo isku-uruurinta ugu badan ee bromantane ee dhiigga ee haweenka celcelis ahaan 2.75 saacadood, iyo ragga - 4 saacadood. Daawada waxaa lagu shiidey beerka, tirtiridiisuna waxay badanaa ku dhacdaa wadada dheeriga ah.
Astaamaha amino-adamantane - bromantane, taas oo keentay saamayn dhiirigelin ah iyo saameyn anxiolytic ah, wuxuu kordhiyaa waxqabadka jirka iyo maskaxda, wuxuu yareeyaa horumarinta hababka daalidda, waxay xawaareysaa dib u soo kabashada xaaladaha caadiga ah iyo kuwa adag ee hypoxia iyo xaaladaha hyperthermia, waxay hagaajineysaa hababka hawlaha, tababarka; waxay hagaajinaysaa isu-socodka dhaqdhaqaaqa, waxay sare u qaadeysaa heerkulka jidhka, waxay leedahay ficilka neuropsychoaktiviruyuschim (sidaas daraadeed waxaa mararka qaarkood loogu yeeraa kiciyeyaasha dareenka maskaxda), waxay muujinayaan antagonism iyadoo la tixgelinayo saamaynta seddexaad ee dab-damiska, waxyeello aan fiicneyn oo aan saameyn ku yeelanaynin shaqeynta chronotropic ee wadnaha iyo cadaadiska dhiigga ee nidaamka, wuxuu leeyahay waxqabadyo tallaal ah.
Saameyn wanaagsan oo bromantane ah oo ku saabsan xuduudaha xaaladda nafsaaniga ah ayaa la aasaasay - mugga iyo xasilloonida feejignaanta, falcelin dareemayaal isku dhafan, xuduudaha guusha howlaha hawl wadeenka. Farsamaynta ficilka bromantane waxay ku saleysan tahay awooda kordhinta waxqabadka xarumaha subcortical-ka ee habka dhexe ee neerfaha (nuclei of the hypothalamus, the reticular nuclei of the tire, hippocampus). Daroogadu wax saameyn ah kuma yeelanayso dhexdhexaadiyeyaasha noradrenergic, laakiin waxay ka warqabaan sifooyinka firfircoonaanta iyadoo loo marayo nidaamka dopaminergic. Joogitaanka saameynta xannibaadda serotonin ee bartamaha ayaa sidoo kale la soo jeediyey. Door cayiman oo ku saabsan xaqiijinta ficil-celinta daawada ee bromantane waxaa lagu ciyaaraa astaamaha antiradical iyo xuubka ilaaliya. Saamaynta ka hortagga ee bromantane waa la xoojiyaa marka loo isticmaalo iyada oo loo isticmaalayo bemitil.
Daroogadu ma laha saameyn la taaban karo oo dhexdhexaadiyeyaasha noradrenergic ah, laakiin waxay dareensan tahay hanti-u-dhaqaajinta nidaamka dopaminergic. Waxaa sidoo kale la soo jeedinayaa joogitaanka serotonin-ka xajmiga dhexe. Door door ah oo ku saabsan helitaanka fayo-dhawrka daaweynta ee bromantane waxaa lagu ciyaara guryaha dabiiciga ah iyo xayiraadda. Saamaynta ilaalinta ee bromantane ayaa la kordhiyaa marka la isticmaalo bemitil. Daroogadu ma laha saameyn la taaban karo oo dhexdhexaadiyeyaasha noradrenergic ah, laakiin waxay dareensan tahay hanti-u-dhaqaajinta nidaamka dopaminergic. Waxaa sidoo kale la soo jeedinayaa joogitaanka serotonin-ka xajmiga dhexe. Door door ah oo ku saabsan helitaanka fayo-dhawrka daaweynta ee bromantane waxaa lagu ciyaara guryaha dabiiciga ah iyo xayiraadda. Saameynta ilaalinta budada bromantane waxaa la xoojiyaa marka la isticmaalo bemitil
Su'aalaha 8 si aad is-weydiiso ka hor intaadan qaadan budada Cetilistat	7 Best Nootropics (Daroogada Smart) ee suuqa Suuqa Noopept